स्वास्थ्य – Page2– Esancharpati
काठमाडौं, २२ मंसिर । वरिष्ठ कलाकार एवम् समाजसेवी श्रीकृष्ण सिंखडाले अपाङगता भएका मानिसहरुका लागि राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्न माग गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा राष्ट्रिय अपाङ्ग श्रीमती संघ, नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया एवम् सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिंखडाले यस्तो माग गरेका हुन । राष्ट्रिय अपाङ्ग श्रीमती संघ, नेपालकी अध्यक्ष उषा […]
5 months ago Wednesday, December 5, 2018
काठमाडौं, १९ मंसिर । यही मंसिर २१ र २२ गते पहिलो पटक वंशाणुगत रोगसम्बन्धि सम्मेलन हुने भएको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सोसाईटी अफ लाइफ साईन्सेज नेपाल र डिकोड जिनोमिक्स् एण्ड रिसर्च सेन्टरको आयोजनामा प्रज्ञा भवन कमलादीमा आगामी शुक्रबार र शनिबार बिहान साँढे ८ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सम्मेलन चल्नेछ । सत्तारुढ दल नेकपाका […]
काठमाडौं — एक सातादेखि वायुको गुणस्तर खस्किए पनि सम्बन्धित निकायले नियन्त्रण र सावधानीका कार्यक्रम ल्याउन भने सकेको छैन। गुणस्तर सुधारका लागि कार्यक्रम नरहेको विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले बताए। जाडो बढेसँगै वायु गुणस्तर खस्कने भएकाले सावधानी अपनाउन उनको सुझाव छ ।नेपालका सात सहरमा काठमाडौं, चितवन, नेपालगन्ज, दाङ, पोखरा, ललितपुर र सिमराको वायु प्रदूषण राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा […]
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिति सन्तोषजनक
काठमाडौं। छातीमा संक्रमण भएपछि सोमबार विहान अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोयोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अरुण सायमी, निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाह र छाती रोग […]
7 months ago Sunday, October 7, 2018
असोज – २१ फलेन्द्र बलमपाकी मगर / युएई सर्लाही सेवा समाज , युएई को संयोजन तथा डिस्कभरी रोयल स्पोर्ट्स एलएलएलसि , युएई को आयोजनमा। जीवन उपयोगी नि:शुल्क आकस्मिक प्राथमिक उपचार तालिम प्रदान गरिएको छ । विकसित र शिक्षित मुलुकहरू मा । मानवीय जिवनमा आकस्मिक आइपर्ने दुर्घटनाका बारेमा सामान्यतः सबैलाई ज्ञान दिइएको हुन्छ । तर हाम्रो […]
8 months ago Thursday, September 6, 2018
काठमाडौं । ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको अध्यक्ष पदमा उद्धब पौडेल सर्वसम्मत रुपले चयन भएका छन् । हस्पिटलको हिजो साँझ सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले पौडेललाई अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हो । पौडेल नेपालको चलचित्र क्षेत्रमा चार दशकदेखि सक्रिय छन्, उनी सरकारद्वारा पहिलो लाइफ टाइम अचिभमेन्ट प्राप्त र विशिष्ट चलचित्रकर्मीबाट विभूषित समेत छन् । हस्पिटलको अध्यक्ष […]
शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक हडतालमा
9 months ago Friday, July 13, 2018
काठमाडौं । दिनदेखि आमरण अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधनको पक्षमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक हडतालमा उत्रेका छन् । उनीहरुले केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै आजदेखि हडताल थालेका हुन् । डा. केसी १४ दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत छन् । तर, उनको मागलाई लिएर सरकारसँग वार्ता हुन सकेको छैन् । डा।केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै […]
उपत्यकाका २३ दूध डेरीमा भेटियो हानिकारक जीवाणु
10 months ago Monday, June 25, 2018
काठमाडौं । उपत्यकाका २३ वटा प्रशोधित दूध डेरीका ३३ वटा ब्रान्ड (पाउच) मा मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने कोलिफर्म नामक सूक्ष्म जीवाणु फेला परेको छ । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको नेतृत्वमा १५ दिनअघि (जेठ २८) संकलन गरिएका ४२ वटा दूधका नमुनामध्ये ३३ वटामा हानिकारक जीवाणु फेला परेको हो । बबरमहलस्थित खाद्य तथा प्रविधिमातहतको केन्द्रीय प्रयोगशालाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको […]
काठमाडौं । नेपाल सरकारले ७० बर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग छलफल सुरु गरेको छ। बजेटमार्फत ज्येष्ठ नागरिकको १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरिएको थियो। बृद्धभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने चुनावी घोषणापत्र विपरित गएर सरकारले बीमाको स्किम ल्याएको हो। स्किमले पाँच हजारभन्दा बढिको प्रतिफल दिने अर्थमन्त्रीले दावी गर्दै आएका […]
डाक्टर इवामुरा मेमोरियल अस्पतालमा एक महिने प्रोस्टेट शिविर
भक्तपुर । भोलिबाट सल्लाघारी स्थित डा। इवामुरा मेमोरियल अस्पतालमा एक महिने प्रोस्टेटको समस्या सम्वन्धि शिविर संचालन हुने भएको छ । शिविर असार १ गतेबाट ३२ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । शिविरमा बरिष्ठ कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट डा अनिल श्रेष्ठ तथा डा अर्बिन शाहले ४० बर्ष उमेर पुगेका पुरुषहरुको प्रोस्टेटको समस्याको उपचार हुने अस्पतालका व्यवस्थापक रञ्जित मारिखुले जानकारी दिए […]